Akachipa Hotels muDubai
Iyo UAE inzvimbo inotyisa yekutanga Middle East mutambo. Inowanikwa kumabvazuva kwedunhu reAraban peninsula, inzvimbo yemhando yekupedzisira-yemazuva ano Dubai ne Abu Dhabi, pamwe nemahombekombe egungwa rejecha uye
Mahotera akachipa muIstanbul, Turkey
January 16, 2022 Shubham Sharma Hotels, Istanbul, famba, Teki
Turkey inonakidza uye inonakidza. Kana uri kufunga nezverwendo rwokuenda kunyika inonakidza iyi, ronga pekugara pekutanga. Kune dzakawanda nzvimbo dzisingadhure muTurkey dzingave dzakanakira vafambi vebhajeti. Kunyangwe ukasarudza mahotera kana mavillas
Hotels muKiyi West
Key West ndicho chitsuwa chiri mudenga reFlorida chinozivikanwawo seSouthernmost Point muUnited States. Key West ndiyo imwe yenzvimbo dzakanaka dzekushanya muUS. Nderimwe remaguta akawana
Tarisa hotera dzeLouisiana muNew Orleans
Louisiana ine rakareba rondedzero yemahotera akanakisa. Sezvo yaive imba kune mamwe ekutanga ehotera hotera muUSA. Kunyangwe nanhasi ine nhoroondo yakafanana yekupa vaenzi vekumusoro-soro. Kwete chete zvakabudirira zve
Mahotera akanakisisa muSan Diego
June 23, 2020 Demi Hotels, famba
San Diego iguta mudunhu reUS reCalifornia. Guta zvakare rakawana zita rekuti California yemahombekombe eguta. San Diego ndeimwe yenzvimbo shoma dzinozivikanwa kwazvo kunzvimbo yekuenda kuzororo. Iyo
Gara Zvirinani MuFrance nePamusoro Mahotera Muguta
Dai 20, 2020 Shubham Sharma Furanzi, Hotels, famba
Kuenda kuFrance kunogara kuri rwendo runonakidza munzira dzose. France ine zvimwe zvekufema-zvinotora nzvimbo munyika. Guta guru reFrance, Paris rinozivikanwa chaizvo seguta reRudo. Vashanyi vakawanda vanosarudza Paris
Ungawana Sei Imba Yako MuAustralia?
April 16, 2020 Demi Ositireriya, Hotels
Mararamiro eAustralia uye misika yehupenyu yakasimba inoita kuti ibudirire nzvimbo yekudyara. Zvino, vatorwa vangaitei neizvi? Sekureva kwekunze Investment Ongororo Bhodhi (FIRB) mushumo wegore. Iko kusanganiswa kwekudyara mune yekutengesa uye yekugara chivakwa nekunze
Nzvimbo Dzakanakisisa Dzekugara muDRC
The Democratic Republic of the Congo (DRC) harisi chete nyika yechipiri pakukura Africa asi kuri chimwe chezvinhu zvekuvaka-vapfumi nyika pasi pano uye ane zvakawanda chendarama, tantalum, tungsten, uye gaba. Kana iwe
February 13, 2020 Demi Hotels, Paresitina, famba